‘आखिर, विर–जारा मिलेरै छाडे ! शाहरुख खानलाई प्रिति जिन्टाले किनिन् |
‘आखिर, विर–जारा मिलेरै छाडे ! शाहरुख खानलाई प्रिति जिन्टाले किनिन्
२०७७, ७ फाल्गुन शुक्रबार १८:४८ February 19, 2021 ताजा खबरक्रिकेट
एजेन्सी । फिल्म होस् वा आइपिएल बलिउड सेलिब्रेटी सधैं चर्चामा रहन्छन् । अहिले, आईपिएलको लिलामीका दौरान प्रिति जिन्टा निकै चर्चामा छिन् । किंग्स् इलेभेन पञ्जाब उनको स्वामित्वको क्लब हो । र, उनी चर्चामा तानिनुको कारण पनि रोचक छ ।
खासमा आइपिएलमा सबै टिमले केही नयाँ खेलाडी भित्र्याएका छन् । किंग्स इलेभेन पञ्जावले ९ जना नयाँ खेलाडी भित्र्याएको छ । यसमध्ये एक खेलाडी तमिलनाडुका हुन् र उनको नाम शाहरुख खान हो । किङ खान भनेर चिनिने अभिनेता शाहरुखसँग नाम मिलेकै कारण यी दायाँहाते ब्याट्सम्यान तथा राइट आर्म स्पिनर अहिले निकै चर्चामा छन् । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले लेखेका छन्– ‘आखिर, विर–जारा मिलेरै छाडे ।’
अभिनेता शाहरुख र प्रिति ‘विर–जारा’ फिल्ममा रोमान्टिक जोडी बनेर देखिएका थिए । प्रितिले १९९८ मा बलिउड डेब्यु गरेकी थिइन् र उनको पहिलो फिल्म ‘दिल से’ मा पनि शाहरुख र मनिषा मुख्य भूमिकामा थिए । एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लेख्छन्, ‘प्रितिले शाहरुखको फिल्ममार्फत बलिउड डेब्यु गरेकी थिइन्, अहिले शाहरुलाई आइपिएलमा डेब्यु गराइन् ।’ अभिनेता शाहरुख पनि आईपिएलबाट बाहिर छैनन् । कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) उनको स्वामित्वको क्लब हो ।
को हुन् शाहरुख खान ?
शारुख खान तल्लोक्रममा आक्रामक ब्याटिङ गर्ने गर्दछन् । तालिम नाडुलाई यस सिजनको शैद मुश्ताक अली ट्रफी उपाधि दिलाउन शाहरुख खानले उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । शारुख पार्टटाइममा बलिङ गर्ने गर्दछन् । शाहरुखले न्यूनतम मूल्य २० लाख रुपैयाँ तोकेका थिए । उच्च रोजाईका साथ उनी पन्जाब पुगेका हुन् । शाहरुखले तमिल नाडुबाट प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलेका छन्। उनले पाँच प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलमा २ अर्धसतकसहित २ सय ३१ रन जोडेका छन्। उनी ब्याटिङ अलराउण्डर मानिन्छन्।